Ity ny tambajotra sosialy dia nahazo laza be toy ny asa fanompoana ho an’ny Fiarahana. An-tapitrisany no mampiasa ny»Fiarahana»toy ny Mampiaraka toerana. Ankehitriny isika dia hahatakatra ny zavatra izay nahatonga izao avo ny lazan’ny tambajotra.
«Mampiaraka toerana»kely toy ny fitsipika»tambajotra».
Tsy misy tranonkala pejy
Ny fifandraisana atao amin’ny alalan’ny ofisialy fampiharana, izay no hazo fijaliana,-ny sehatra ary mety tsara ho an’ny rehetra ankehitriny OS.
Format — chatovy. Toa mampahatsiahy ny tsy hay hadinoina ICQ, fa ny fahafaha-miasa dia be kokoa.
Ao amin’ity fampiharana ny mety mba handefa ny fanomezam-pahasoavana, misy ny be pitsiny ny fikarohana mpampiasa, sy ny mpampiasa ny asa izay mampiseho ny fiovana eo amin’ny mombamomba azy.
Ny tambajotra dia rendriky ny olona rehetra manerana izao tontolo izao, anisan’izany i Rosia. Moskoa, Cape town, Stockholm, ao Moskoa koa dia tsy namela. Satria ny tena tambajotra sosialy mirona ho an’ny miteny rosiana mpampiasa, dia tsy mahagaga raha misy olona avy amin’ny firenena hafa.
Hanomboka-mila ny misintona ny ofisialy ny fampiharana noho ny fitaovana. Afaka misintona azy avy ny toerana:
Rehefa dinihina tokoa, dia nahavita soa aman-tsara ny misintona ny Fiarahana amin’ny tranonkala»Mampiaraka Toerana»dia mitaky anao mba hisoratra anarana.
Ity dingana ity dia tsotra
Rehefa nisoratra anarana, fampiasana ny finday isa.
Aorian’ny fisoratana anarana dia afaka mampiasa ny»Mampiaraka Toerana»toy ny Mampiaraka toerana. Mba hiditra ao dia hahita fahombiazana afa-tsy amin’ny fanampiana ny fanamarinana.
Mba hamorona pejy iray dia tsy ho mora, satria ny interface tsara dia intuitive. Mba hampidiran’izy ny mombamomba pejy dia tsindrio»Ny pejy». Amin’izao dia afaka manomboka ny famoahana ny mombamomba azy
← Online chat tsy misy fisoratana anarana